I-LIVEU IBC 2019 PREVIEW - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » LIVEU IBC 2019 PREVIEW
Indawo ye LiveU - Yima 3.B62
I-LiveU iya kubonisa iipotifoliyo zayo zeSI5G-izixhobo ezikhuselekileyo zokuhlaziya iindaba ezikhoyo kunye neendlela ezithintekayo zemidlalo yazo zonke iintlobo zesiganeko. Ukujonga kwimidlalo ye-2020 eTokyo, i-LiveU isele ixhomekeke ekuxhaseni amakhulu kumakhasimende kunye nobuchwepheshe bayo be-HEVC.
Iimbonakalo zeBC ziquka:
DALA: ii-HEVC ze-4K zeyunithi zeenkundla
I-LiveU ye-LiveU ye-LU600 4K HEVC isisombululo sokudlulisa i-portable inikeza ividiyo engenanto engenamsebenzi ogqithiseleyo. I-LU600 yakamuva ye-HEVC 4K-SDI iququzelela i-4Kp50 / 60 ukusasazwa kwemveliso ephezulu, ixhasa i-VR nezicelo ze-360.
I-unit yethu esebenzayo, i-LU300 HEVC enamandla yokusasaza. Kwinqanaba lexabiso elikhangayo, isisombululo se-LU300 HEVC sihambelana nabathengi abafuna i-unit unit encinane yevidiyo ephezulu. Ngokugqithisekayo, i-LU300 inokuthi isebenze njenge-encoder yevidiyo ye-standalone okanye isetyenziswe njenge-LiveU DataBridge yeselula ye-hotspot yokudibanisa ngokubanzi kwintsimi.
I-1U 4K HEVC i-rackmount, i-LU610 4K HEVC kwizithuthi nakwiindawo eziqingqiweyo. Le khowudi encomekayo, esekelwe kwi-LiveU ye-LU600 4K ye-HEVC ubuchwepheshe, inikeza isisombululo esipheleleyo se-Sbb kwiimoto ze-SNG, i-point-to-point and distribution point-to-multi distribution.
Siza kubonakalisa zethu zakutshanje Izicelo zokuvelisa ekhaya kwimidlalo kwaye baphile abavelisi bemicimbi, kuquka:
Ukukhanya kwe-Tally - ukuletha ukukhululeka kwamava e-studio ephilayo kwintsimi, esi sixhobo esitsha esibalulekileyo senza abashicileli bezentsimi bazi ngokukhawuleza xa behlala emoyeni ngokusebenzisa isibonakaliso sokukhanya esibomvu esixhunywe kwiyunithi ye-LiveU.
I-LiveU Graphics - ithuluzi lokuvelisa ifu lemisebenzi elisebenzisekayo lula lokufaka imifanekiso emihle yokuhlala imilambo. Abasebenzisi banokukhetha kuphela ukusuka kwiimifanekiso zetekisi ezilungele ukusetyenziswa okanye ukuzakhela kunye nokwahlula ngqo nakweyiphi imidiya yoluntu okanye i-CDN.
Ukuvumelanisa kwe-AV kunye nenkxaso kwii-8 zomsindo
Ulawulo lwe-LiveU - ukuvumela ukulula okulula ukulawula iiyunithi ze-LiveU nge-smartphone
Ngokulinganisa ngokuchanekileyo kokulibaziseka kokuphela kokuphela, ukuveliswa kweKhaya lokuKhuphela kweKhaya eliKhuselekileyo kukuvumela ukuba iziganeko ezingaphezulu zifakwe kunye nokusetyenziswa okulula kunye neendleko ezinciphise. Imicimbi ephilileyo yekhamera iyakwazi ukuveliswa kwiziko lokulawula i-studio kwiziko eliqhelekileyo kunokuba kuveliswe imveliso engabizi kwi-site kwaye Sathelethi iilori.
Ubuchwepheshe be LiveU kwi-FIA World Rally Championship
UKUQALA: I-cent-centric cloud i-AI kunye nokunye
Ukuqhuba umxholo onenjongo, LiveU AI unikezela ngenkonzo ye-AI yecala yeendaba ze-global news gathering. Inkonzo epheleleyo, enikwe i-newsbridge, inikezela ngokubanzi isamba sogalelo kunye ne-AI-based based indexing tools ukuze kuphuculwe, kusetshenziswe kwaye kufinyelele umxholo okholileyo okanye wefayile. Ukusebenza ngaphakathi kwiplani yokuLawula iNkcubeko ye-LiveU, i-LiveU AI iya kunceda abahleli ukuba bafune kwaye bafumane imifanekiso yabo efunekayo ngokukhawuleza kunanini ngaphambili, ukunciphisa umthwalo wabo wokusebenza kwansuku zonke nokwenza imveliso yexesha langempela ngokufanelekileyo.
Siya kubonisa kwakhona indawo entsha ye-LiveU Central, Sign On On (SSO) kwi-SSO yokuphathwa komsebenzisi okhuselekileyo, idibene nencwadi esebenzayo yomthengi okanye i-Identity njengeNkonzo (IDaaS).
UKUSEBENZISA: Ukuhanjiswa kwevidiyo ye-IP
LiveU Matrix i-LiveU kwisizukulwana esilandelayo sokusasazwa kwevidiyo ye-IP, esanda kukhethwa ngu-CBS Newspath. I-Matrix inikezela ngenkonzo ephucukileyo yokunikwa kweengxelo, ukunika amandla abaphathi bamagumbi eendaba ukuba bancede ngokukhawuleza kwaye bakunike lula amakhulu amakhulu abo badibaniselwano abangenakulinganisela ukufumana ukutya okuvela kwiiyunithi ze-LiveU kwintsimi kunye neminye imithombo ngaphandle kokuphazamiseka, izibonelelo ezongezelelweyo, okanye iimali ezibiza. I-Matrix nayo ifanelekile kubavelisi bezemidlalo abajongeyo ukuba bahlalise imicimbi yezahlulo ngokulula kunye neendleko ngempumelelo kwiindawo ezininzi kunye nezitishi ze-TV.
4K 5G AI iselula ehlangeneyo Ukunxibelelana kwamaselula Cobalt Encoder Igalelo HEVC i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SJGolden - SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC TVU Networks I-Ultra HD Forum ndiphila	2019-07-10
Previous: I-RED BEE MEDIA IQALA UKUXHUMEKA KWE-RED LAB KUNYE E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS
next: Umhleli weVidiyo